कोरोना संक्रमित वाग्लुङकी १७ वर्षीया किशोरीको उपचार हुँदै - Mitho Khabar
कोरोना संक्रमित वाग्लुङकी १७ वर्षीया किशोरीको उपचार हुँदै
March 29, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कोरोना संक्रमित वाग्लुङकी १७ वर्षीया किशोरीको उपचार हुँदै
कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकी बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी एक १७ वर्षीया किशोरीलाई धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालिएको छ । घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी युवतीलाई कोरोना पुष्टी भएसँगै अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा शनिबार भर्ना गराएर उपचार थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिए ।
संक्रमित किशोरीको अवस्था सामान्य रहेको र आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुरौले स्वाथ्यकर्मीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा आइसोलेसनमा राखेको बताए । गत चैत्र १२ गते बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा धौलागिरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरमै पुगेर नमुना संकलन गरिएको थियो । ती युवतीले शुरुमा आफूलाई सामान्य ज्वरो आएको तर कठिन नभएकाले स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्न उनले आनाकानी गर्दै आएकी थिइन् । नमुना संकलन गरेर टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौं पठाइएको स्वाब परीक्षणमा शनिबार कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो ।
बेल्जियमा आमा रहेकाले दुई महिना घुमेर गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको ‘क्यूआर ६५२’ विमानबाट नेपाल आएकी थिइन् । त्यही विमानमा आएकी १९ वर्षीया काठमाडौंकी युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको १० चैतमा पुष्टि भएको थियो ।
भारतले छाड्यो चारसय भन्दा बढी कैदीबन्दी
प्रदेश ५ : लकडाउनका नाममा ‘भद्दा मजाक’, कोरोना संक्रमणलाई जनताले सिरियसली लिएनन्, प्रहरी रमिते !
नेपालमा आज राति १२ बजेदेखि बन्द हुदैछ यस्ताे काम, अब के हुन्छ ?
बच्चा बोकेको महिला माथि प्रहरी द्वारा एस्तो दुर्ब्यबार सक्दो सेर गर्नुहोला (पुरा भिडिओ)